Ungasarudze sei yakakodzera yekuisa musoro mhinduro kune epamberi SMT yekuisa michina?
Kana makambani akasarudza michina yekuisa yepamusoro, izvo zvitatu zvinodiwa ndeyekuisa chaiyo kukwirisa, kumhanyisa kumisikidza kumhanyisa, uye kugadzikana kwepamusoro kuve nechokwadi chekumhanyisa-kumhanya uku uchisangana nemazvo kweiyo micro chip chinhu chekuisa. Kuti uwane zvaunoda, kuiswa kwakakodzera ...
Mushini wekuisa wakaenzana neirobhoti. Zvese zviito zvaro zvinopfuudzwa nema sensors zvobva zvatongwa zvoitwa nehuropi hukuru. Topco Maindasitiri achagovana newe kuti iwo wekuisa muchina une imwe mhando yesensu. 1. Pressure sensor Iyo yekuisa muchina, kusanganisira v ...
SMT yekugadzira mutsara michina sisitimu sumo
Iko kuiswa kwe SMT yekugadzira tambo chirongwa chakarongeka. Kubudirira kwekugadzwa kweiyo smt yekugadzira tambo inokanganisa mashandiro akajairwa eSMT yekugadzira tambo, kunyangwe ichigona kuzadzisa mhedzisiro inotarisirwa, uye kana ichigona kudzosera mari nekukurumidza nekukurumidza ...
Chii chandinofanira kuteerera ndisati ndashandisa iyo yekuisa muchina
Nguva zhinji, kuitira nyore kushandisa zvishandiso zvemagetsi, isu hatiteedzere rairo. Izvi hazvingokonzere chete kukuvara kwemidziyo yemagetsi, asi zvakare zvinoderedza hupenyu hwayo. Izvi zvinoitikawo patinoshandisa iyo yekuisa muchina. Tinofanira kutevedzera rairo Inodiwa inf ...
SMT yekugadzira maitiro
1. skrini yekudhinda: basa rayo nderekunamatira pasita kana smudge kunamatira kune pcb solder pad kugadzirira iyo welding yezvinhu. Iyo michina inoshandiswa ndeye silika skrini yekudhinda muchina (skrini yekudhinda muchina), iri pamberi peye SMT yekugadzira mutsara. 2. Glue ichipa: inodonhedza glue kune t ...
GUS - kutsvagisa uye kusimudzira kwemask muchina
Masiki, se "akajairika" uye zviwanikwa zvine hungwaru zvekudzivirira nekudzivirira, ari kushomeka uye anoda pasi rese, kunyangwe mune dzimwe nzvimbo. Mune ino "denda rehondo", isu tinogona kumisa denda pakutanga, kuponesa hupenyu pakutanga uye kupfuura nemumatambudziko earlie ...
ne admin pane 20-11-01
Zvichienzaniswa neyakajairwa kutaurirana tekinoroji, 5G ine yakasimba kuita, zvimwe zviitiko uye nyowani ecology, iyo inogona kunyatso kusangana nezvinodiwa zvekushandisa zvetsika kugadzira mabhizinesi easina waya network mukushandurwa kwehungwaru kugadzira, uye kutyaira ruzivo ...
ne admin pane 20-10-02
1. gungano rerutivi rimwe chete : inouya yekuongorora => PCB divi Siriki skrini yekunamatira pasiti (s ...